Myanmar : Nandany Ny Androm-piainany Tamin’ny Fanangonana Kapilanà Gramôfôna I Maung Maung · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2017 11:22 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Português, English
Maung Maung mampiseho gramôfôna. Sary avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy.
Lahatsoratra avy amin'ny The Irrawaddy, haba-tranonkalam-baovao tsy miankina any Myanmar, ity lahatsoratra navoakan'i Wei Yan Aung ity, ary navoakan'ny Global Voices indray ho fandraisana anjara amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 1960, rehefa tao amin'ny kilasy faha-7 i Maung Maung, dia nomen'ny renibeny azy ilay gamôfôna His Master’s Voice (HMV, Feon'ny Tompony), ilay antsoin'ny any an-toerana hoe gramôfôna misy sarin'alika, fanomezana izay nameno ny sainy nandritra ny androm-piainany.
“Izany no antony iray lehibe izay nandrisika ahy hanangona kapilanà gramôfôna,” hoy i Maung Maung, izay fantatry ny maro amin'ny hoe Maung Maung mpikaroka.
Raha ny tantaran'ny gramôfôna any Myanmar no resahana dia tsy misy olona mahalala betsaka an'izany afa-tsy i Maung Maung, izay nahangona, efa ho taonjato iray tamin'ireo kapilanà gramôfôna mendrika- nanomboka tamin'ny kapilan'ny lalaon'i Saya Pu, mpanakanto an-kalamanjàna tamin'ny fotoana nanjakan'i Thibaw, ilay mpanjakan'i farany tao Myanmar tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, ka hatramin'ny kapilanà gramôfôna novokarina farany tany Myanmar tamin'ny 1976 izay nataon'ny mpiangaly mozika klasika Kyaukpadaung Kyaw Lwin tamin'ny 1976.
Fony izy mbola mpianatra taorian'ny nanomezan'ny renibeny azy gramôfôna no nanombohany nanangona kapilanà gramôfôna ary mbola nanangona izany izy nandritra ny dingana maro teo amin'ny fiainany, mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo, manamboninahitra tao amin'ny polisy, ary avy eo mpisolovava.
Niraketana ny mozika klasikan'i Myanmar, kolontsaina nenti-paharazana sy tranga ara-tantara izay nampitaina tamin'ny isan-taranaka tamin'ny alàlan'ny lovan-tsofina ary avy amin'ny boky sy ny haisoratra ny gramôfôna, hoy izy.
Gramôfôna sy ny forongony. Sary avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Teny amin'ny anjerimanontolo [Yangon] aho tamin'ny 1972 ary nanomboka very laza ny gramôfôna. Noho ny fivoahan'ny famakiana horonampeo (K7) sy ny fitontongan'ny kalitaon'ny kapilanà gramôfôna.
Nampifandraisiny tamin'ny fampiharan'ny Antoko Programa Sosialista any Birmania (BSPP) ny rafitra sosialista tamin'ny fotoan'andro ilay fihenan'ny kalitao.
Satria lasa nalaza be ny famakiana ny horonampeo, dia namidin'ny olona tamin'ny mpaka tombony ny gramôfônany ntaolo ben'izy ireo.
Tamin'ny fotoan'andro, nanomboka natakalon'ny olona famakiana horonampeo ny gramôfônany. Tato aoriana, lasa [ fako] nifanongoa toa atontam-biriky ireo gramôfôna. Tsy misy manakana anao raha te-haka azy ireo ianao satria heverin'ny olona fa fako ireo ary manadio fotsiny ianao. Raha izaho no tale jeneralin'ny [onjam-peom-panjakana ] Radio sy Televisiona Myanma [MRTV], dia nalaiko tamin'ny fiarakodia ireo.
Nikaroka tao amin'ny atontanà gramôfôna sy kapila tany Yangon izy ary nitondra izay tena tiany tany Daik-U, tanàna niaviany any amin'ny faritr'i Bago.
Rehefa vita ny fianarany, nampianatra tao amin'ny sekoly tany Daik-U izy ka ny haisoratra Myanmar sy ny nasionalisma izay voarainy tany Anyeint [ trano fanaovana fampisehoana nenti-paharazana Birmana] ary ireo hiranà saribakoly ampiresahana [izay notendreny] voarakitra ao amin'ny kapilanà gramôfôna no nampianariny.
Bokim-pikarohan'i Maung Maung momba ny kapilanà gramôfôna. Sary avy amina'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Avy eo nanatevin-daharana ny mpitandro filaminana izy ary niasa ho toy ny lehiben'ny mpitandro filaminana tany amin'ny tanàna maro tany amin'ny faritr'i Bago.
Rehefa reny fa nisy olona nanana kapilanà gramôfôna tsy fahita firy, dia nentiny tany ny gramôfônany. Novidiany ilay kapilanà gramôfôna raha namidin'ny tompony, fa rehefa tsy mety ilay tompony dia niangaviany mba hamela azy hilalao izany tamin'ny gramôfônany.
Mbola nanohy nanangona kapilanà gramôfôna izy na dia efa lasa mpisolovava aza taorian'ny fisotroan-drononony tamin'ny maha-mpitandro filaminana azy. Mbola mandeha maka gramôfôna sy kapila any amin'ny mpanjifany sy ny namany foana izy
Ilay minisitry ny filazambaovao taloha, U Kyi Aung, izay mpankafy gramôfôna ihany koa, indray mandeha niangavy azy mba hanome ny kapilanà gramôfônany ho an'ny ministera, fa nolaviny.
Na izany aza, niaraka tamin'ny faneken'ny ministra, dia afaka nanangona ny kapilanà gramôfônan'ny MRTV arakaraky ny karazany izy.
Trano fanatobiana ireo angonà kapilanà gramôfônan'i Maung Maung. Sary avy amin'i Myo Min Soe / The Irrawaddy
Nanana kapilanà gramôfôna maro be ny MRTV, saingy tsy betsaka noho ny voatahiriko raha resaka kapila manana soatoavina ara-tantara marina, ohatra, izaho irery ihany no manana ny rakitra voalohan'ny amin'ny hiran'i Doh Bamar izay fiandohan'ny hiram-pirenen'i Myanmar amin'izao fotoana izao ary nohirain'i Thakhins tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany. Na izany aza, tena nahasoa tamin'ny fikarohako momba ny gramôfôna izany. Isaorako ny manampahefana noho izany.
Miorina amin'ny angonà kapilany, ireo tapatapaka gazety, dokambarotra ary modely, dia namoaka boky fikarohana misy pejy 1.000 mirakitra ny tantaran'ny kapilanà gramôfôna izy, izany no nahazoany ny loka nasionalin'ny haisoratra tamin'ny 2015.
Fa ny momba ny hoavin'ireo kapila 100.000 izay nangoniny efa ho enimpolo taona, dia hoy izy :
Amim-pahatsorana no itenenana, tsy manantena ny hahazo fanampiana avy amin'ny ministeran'ny [filazàmbaovao] aho. Rehefa miteny zavatra aho, dia mety hamaly ry zareo [ ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministeran'ny filazàmbaovao] hoe handefa taratasy any amin'ny ministra na hiverina any indray amin'ny fotoana izatsy na zaroa. Tsy mampaninona ahy izany. Raha ny marina, tokony ho aty aminay ry zareo. Raha tsy izany dia izaho mihitsy no hanao izay. Fa raha misy olona mahalala ny soa toavina ka afaka mitahiry ny kapilako any aminà tranombakoka iray na ny toy izany, dia hafindrako any ireto. Hanohy hanangona ireny kapila ireny aho. Izany no fiainako.